Wasiirka warfaafinta Puntland oo jawaab ka bixiyey warbixinta Dr. Shamsulbari ee xuquuqul insaanka Somaliya. – Radio Daljir
Wasiirka warfaafinta Puntland oo jawaab ka bixiyey warbixinta Dr. Shamsulbari ee xuquuqul insaanka Somaliya.
Maarso 31, 2010 12:00 b 0
Garowe, Mar 31 – Wasiirka warfaafinta Puntland ayaa maanta shir jaraa’id ku sheegay in dawlada Puntland ay soo dhawayanayso warbixinta Dr. Samsulbari, balse beeniyey dhawr qodobo oo lagu dhaliilay Puntland. La dhaqanka saxaafada, muhaajiriinta, tahriibayaasha, iyo la macaamilka barakacayaasha ayaa ka mid ahaa meelaha ay warbixintu ku dhaliishay dawlada Puntland.
Tababar ku saabsan ka hortagga Hargabka shimbiraha oo maanta ka furmay Garoowe.